Wụnye Microsoft Edge Browser na openSUSE
OS akwadoro: mepereSUSE Leap - 15.x.
Ozugbo emelitere, mee iwu mmelite.
Nkuzi a ga-eji ọnụ maka nrụnye achọtara na ya Ihe omume> Gosi ngwa> Nkwụsị.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịwụnye Microsoft Edge Brower beta ma ọ bụ dev (n'abalị) wuo ma ọ bụrụ na ị budatala ebe nchekwa ahụ. A naghị atụ aro ụdị abụọ a maka ojiji kwa ụbọchị, ọkachasị ọ bụghị na desktọpụ isi ma ọ bụ ihe nkesa mmepụta. Otú ọ dị, ị nwere ike iwunye nsụgharị ọzọ maka ndị chọrọ ibi na nsọtụ.
Ka imelite ihe nchọgharị Internetntanetị Microsoft Edge, mee ya zypper ume ọhụrụ & melite iwu na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Na-esote, mee iwu na-esonụ.